baravanews, Author at BaravaNews - Page 2 of 15BaravaNews | Page 2
You are here: Home / Author Archives: baravanews (page 2)
Author Archives: baravanews
Feb 9, 2019 Comments Off on Fulham vs Manchester United
Maanta oo Sabti ah 09/02/19 waxa ciyaar aad iyo aad u adag waxaa ciyaaray Fulham iyo Manchester United. Ciyaartu waxay aheed ciyaar kulul oo dhex maray labada koox, waxay ciyaartu ku dhamaatay 3 goal iyo 0 goal.
Manchester United waxay ku timisd booskii 4 ee premier league ee Ingriiska. Ciyaartu waxaa lagu ciyaaray Garoonka Fulham
Hadaba goolasha Manchester United goolka kowad waxa dhaliyay Lukaku minute ciyartu ka dib, ama 2 labada gool dambe waxa dhaliyay ciyaryahanka Rushford.
Ciyartu waxay ku dhamatay 3 – 0
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhaba ayaa sheegaya in odayaasha beesha uu kasoo jeedo Mukhtaar Roobow ay diideen lacag xaal-marin ah oo ka timid MW. Farmaajo.
Lacagtan oo sida la sheegay dhowr milyan oo dollar ah, ayaa isugu jirta magta dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday Baydhaba, baanta dadka dhaawaca ah iyo xaal-marinta qaladadkii ay sameeyeen ciidamada dowladda.
Sida aan xogta ku helnay, lacagtan ayaa waxaa beesha usoo bandhigay guddoomiyaha baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo Baydhaba ka wada dadaallo la isugu soo dhoweynayo dowladda iyo beesha Roobow, isaga oo ka wakiil ah MW. Farmaajo oo cabsi weyn ka qaba dacwad dhawaan laga gudbin doono sida uu xaqiijiyay Cabduldalqadir Mursal oo ka mid dadka gudbinaya dacwadda.
Ka sokow lacagta, Mursal ayaa sidoo kale odayaasha u ballan-qaaday in Mukhtaar Roobow lasii dayn doono.
Si katsaba, beesha Roobow ayaa la sheegay inay ku gacan seertay yabooha Mursal, kuna adkeysatay in marka hore lasii daayo Roobow, kadibna wixii dhacay ay kala hadli doonaan xukuumadda.
Aqoonyahanno ka soo jeeda beesha Digil & Mirifle ayaa lagu wadaa in ay dhawaan dacwad ka dhan ah MW. Farmaajo aay u gudbiyaan maxkamad ku taal gobolka New York oo degaan u ah MW. Farmaajo waxaana lagu soo eedeynayaa ku xadgudib xuquuqul insaan iyo dilka shacab si nabad ah u mudaaharaadayay.
Qurba joogta Beesha uu ka soo jeedo Muktaar Roobow ayaa iska aruuriyay adduun dhan $1 Milyan & bar oo loogu talo galay qarashka ku baxaya qareenada gudbinaya dacwada ka dhanka ah MW. Farmaajo.
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xooggan uu dhex maray ciidamo Itoobiyaan ah iyo xoogagga Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa ka dhacay meel ku dhaw tuulada Deynuunaay oo u dhaxeysa Baydhabo iyo degmada Buur Hakaba ee gobolka Baay, kaddib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ciidamada Ethiopia ah oo ku sii jeeday dhinaca Baydhabo.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay dagaalka oo leysku adeegsaday hub culus uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Al-shabaab oo dhankooda ka hadlay dagaalanka waxaa ay sheegeen in ay ku dileen dagaalka 53 Askari, laakiin ma jiraan ilo madax-bannaan oo warkaasi xaqiijinaya.
Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca taliska ciidamada AMISOM qeybtooda Koonfur galbeed oo ka hadlayay dagaalkan dhaxmaray ciidamada Itoobiya iyo Al-shabaab.
Jan 15, 2019 Comments Off on Ciidamo ka tirsan Dawladda Kenya oo gubay xarun ay Leheed Shirkadda Hormuud ku lahayd J/hoose
Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Kenya, gaar ahaan kuwa la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaan (Anti-Terror) ayaa lagu soo waramayaa in ay gubeen xarun ay shirkadda Hormuud ku lahayd deegaanka Cali-Buuleey oo qiyaastii 30-km dhanka waqooyi kaga beegan deegaanka Dhoobleey ee gobolka J/hoose.
Ciidamadan oo la sheegay in usoo talaabeen xadka dhanka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay Miinooyin ku xireen xaruntii Shirkadda ay ku lahayd tuuladaasi oo ku taal nawaaxiga soohdinta labada dalka, kadibna ay qarxiyeen, waxaana halkaasi ku burburiyay Anteenooyinkii shirkadda iyo qalabkii yaallay xarunta.
Saraakiil ka tirsan howlwadeennada shirkadda Hormuud ayaa HOL u sheegay in sidoo kale ay ciidamadu jir-dileen laba kamid ah shaqaalaha shirkadda oo ku sugnaa xarunta.
Isgaarsiintii shirkadda Hormuud ee deegaannada Cali-Buuleey, Diif, Dhuyac-garoon iyo Girileey ayaa hawada ka maqan, ayadoo dadka ku dhaqaan deegaanadaasi ay saameysay arintan, maadaama ay bulshadu ku xiriirto islamarkaana aad u isticmaasho adeegga EVC ee lacagaha la isugu xawilo.
Bishii August ee sanadkan ayay ahayd markii sidan oo kale ay ciidamada Kenya u burburiyeen isla xaruntan.
Sidoo kale ciidamada Kenya ayaa hore u burburiyay xarumo dhowr ah oo ay shirkaddu ku lahayd deegaannada Ceel-baande, Dhamase, Khadiijo Xaaji, Dhegalaab iyo deegaana Dhuuntoow oo ka kala tirsan gobollada J/hoose iyo Gedo.
Lama garanayo sababta ay ciidamada Kenya u beegsanayaan xarumaha shirkadda Hormuud, waxaana saraakiil ka tirsan shirkadda oo aan weeydiinnay ay sheegeen in aysan ogeyn ujeedada ka danbeeyso arimahan, waxayna walaac ka muujiyeen ololahan ay ciidamadan Kenya ku burburinayaan xarumaha shirkadda ee ku yaal gobollada soohdinta ku yaal ee Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya weli wax tallaabo ah kama qaadin arrintan, mana jirto cid ciidamada Kenya kula xisaabtameeysa xad gudubyada ay ka geeysanayaan gudaha dalka.
Qaramada Midoobay ayaa xadiiday joogitaanka shaqaalaheeda ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaalida, siday ay ogaatay Caasimada Online.
Sida ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen Caasimada Online, arrintan ayaa sabab looga dhigay weerarkii hoobiyaasha ee kowdii January lagu qaaday xarunta QM ee Muqdisho, oo ku dhex-taalla xarunta Xalane, ee ay degan yihiin shisheeyaha ku sugan Soomaaliya.
Weerarkaas ayaa waxaa lagu dhaawacay saddex ka mid ah shaqaalaha QM.
Qaar ka mid ah shaqaalaha QM ee Muqdisho, oo qorshuhu ahaa in maanta ay u safraan Muqdisho, ayaga oo kasoo laabtay fasax sanadeedka cusub, ayaa loo sheegay inaysan tagin Muqdisho oo ay joogaan Nairobi.
Go’aanka QM ayaa la sheegay inuu saamaynayo kaliya shaqaalaheeda Muqdisho.
Ma cadda inta uu soconayo go’aanka kasoo baxay QM, waxaana uu kusoo aaday xilli ay xiisad ka dhex oogan tahay QM iyo dowladda Somalia, kadib markii Somalia ay cayrisay wakiilkii QM ee Soomaaliya, Nicholas Haysom
Xoghayaha guud ee QM, Antonio Guterres ayaa cambaareeyay weerarkii Xalane ee lagu qaaday dhismaha ugu weyn ee Qaramada Midoobay ay ku leedahay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Todobo madfac ayaa ku dhacday xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho kowdii Janaayo. Al Shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weerarka.
Maanta oo Arbaco ah 02/01/19 waxa ciyaar aad iyo aad u adag waxaa ciyaaray Newcastle iyo Manchester United. Ciyaartu waxay aheed ciyaar kulul oo dhex maray labada koox, waxay ciyaartu ku dhamaatay 2 goal iyo 0 goal.
Ciyartu waxay ku dhamatay 2 – 0
Dec 30, 2018 Leave a comment
Manchester United waxay ka badisay Bournmouth 4 goal 1 goal
Dec 30, 2018 Comments Off on Xildhibaannada Golaha Shacabka oo meel mariyay Miisaaniyada Dowladda ee sanadkan 2019ka
Mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa fadhiggoodii maanta ee xarunta Baarlamaanka waxaa ay goor dhaw ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2019ka.
Xildhibaannada dood ka yeeshay Miisaaniyada ayaa ugu danbeyntii waxaa ogolaaday 174 mudane ayaa ogolaaday, ma jiro Xildhibaan ka aamusay ama diiday ansixinta miisaaniyadda dowladda 2019.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka mudane Maxamed Mursal oo kulanka shir guddoominaya ayaa sheegay in dhamaan xildhibaanada qaranka ay cod wada ogol ah ku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda 2019.
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa horay ansixiyey miisaaniyadda sanadka 2019, oo gaareysa 340 milyan oo dollar.
Meel Marinta Miisaaniyada ayaa horey wadnaha farta uga hayay Wasaarradda Maaliyada, iyadoo marar badan xildhibaannadu ka keeneen dood, mar marka qaar lagu kala qeysamayay.
Total Hits : 98548